ဘုရားသခင်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည် | Myanmar Our Daily Bread
ဖတ်ရန် ဟေရှာ ၃၀:၈-၁၈ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ □ က ၇-၉ □ မ ၃
ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့၌ ကျေးဇူးပြုလိုသောငှာ မျှော်လင့်တော်မူမည်။ (:၁၈)
Denise Levertov သည် နာမည်ကြီးကဗျာဆရာမ မဖြစ်မီ သူ့အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် က သူလုပ်ချင်ရာကို ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်သည့်ဇရှိသူပီပီ နာမည်ကြီး ကဗျာဆရာ T.S Eliot ထံသို့ သူရေးသည့်ကဗျာ အထုပ်လိုက်ကို ပို့ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြန်စာကို စောင့်နေခဲ့သည်။ အံ့သြစရာမှာ ဆရာ Eliot သည် သူ့လက်ရေးဖြင့် စာမျက်နှာ ၂မျက်နှာရှိသော အားပေးစာကို ပြန်ပို့ခဲ့သည်။ သူမ၏ “The Stream and the Saphire” ကဗျာစာအုပ်၏နိဒါန်းတွင် ကဗျာများက သူမကို ဘုရားရှိကြောင်း မယုံကြည်သော အခြေအနေမှ ခရစ်ယာန်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသို့ ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်ကို မာရိဝန်ခံအပ်နှံခဲ့ပုံအကြောင်း ရေးသားသည့် Annunciation ဟူသော ကဗျာမှာ တန်ခိုးအရှိန်နှင့်ပြည့်စုံ သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏လွှမ်းမိုးမှုမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏သား​တော် ခရစ်တော်ကို မာရိအနေနှင့် လွတ်လပ်စွာဖြင့် လက်ခံခြင်းကို အလိုရှိကြောင်းအချက်အားသူသတိပြုမှတ်သားမိပြီး “ဘုရားရှင် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည်” ဟူသော စကားလုံးက ကဗျာ တစ်ပုဒ်လုံး၏ အဓိကအသက်အဖြစ် ပေါ်လွင်သည်။
Levertov သည် မာရိ၏ဇာတ်လမ်းတွင် သူ့ကိုယ်သူ ပြန်မြင်သည်။ ဘုရားရှင်သည် သူမကိုချစ်လိုသောဇောစိတ်ဖြင့် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည်။ သူမကို အတင်းအကြပ် ဖိအား မပေးခဲ့ပါ။ ကိုယ်တော်စောင့်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများကို ကောင်းချီးပေးရန်အတွက် မျှော်လင့်ခြင်းအပြည့်ဖြင့် မည်မျှစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်ကို “ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့၌ ကျေးဇူးပြုလိုသောငှာ မျှော်လင့်တော် မူမည်” (၃၀:၁၈)ဟု အလားတူအဖြစ်မှန်ကို ပရောဖက်ဟေရှာယ ရေးသားခဲ့သည်။ သူ့လူမျိုးတော်ကို ကြင်နာမှုများဖြင့် လွှမ်းမိုးပစ်ရန်အတွက် သူ၏ကမ်းလှမ်းမှုကို လိုလိုလားလား လက်ခံမည့် အချိန်ကို ဘုရားရှင်စောင့်ဆိုင်းတော်မူသည်(:၁၉)။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်၊ လောက၏ကယ်တင်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ သူ့အား ကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်မှုကို စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းမှာ အံသြစရာပင်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို အလွယ်တကူ ကြိုးဆွဲချယ်လှယ်နိုင်သော်လည်း စိတ်ရှည်စွာ နှိမ့်ချမှုအပြည့်ဖြင့် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းတော်မူသော ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။ WINN COLLIER
သင့်အသက်တာ၏ မည့်သည်အခန်းကဏ္ဍကိုအပ်နှံရန် ဘုရားရှင်သင့်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသနည်း။ သူ့ထံသို့ မည်သို့ လုံးဝဥဿုံ အပ်နှံနိုင်မည်နည်း။
ဘုရားရှင်သည် ကျွန်ုပ်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းသိရခြင်းက နားလည်ရခက်ပါ၏။ “ကျွန်ုပ်ကို! ... စောင့်နေတာ!... ဟုတ်လား။” ထိုအချက်ကြောင့် ကိုယ်တော့်ကို ယုံကြည်ကိုးစားမိပါ၏။ ကိုယ်တော့်ကို လိုချင်မိပါ၏။ ကြွလာတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏ဖြစ်တည်ခြင်း အလုံးစုံကို ကျွန်ုပ်အား ပေးသနားတော်မူပါ။